हटियाको पूर्णकोटमा पिकनिक स्पट निर्माण : प्याराग्लाईडिङ्को सम्भाब्यता अध्ययन गरिने ! – ebaglung.com
हटियाको पूर्णकोटमा पिकनिक स्पट निर्माण : प्याराग्लाईडिङ्को सम्भाब्यता अध्ययन गरिने !
२०७४ फाल्गुन २९, मंगलवार १८:२६	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
गुमानसिँह घण्डारी, गल्कोट २०७४ फागुन २९ । हटियाको पर्यटकीय स्थल पूर्णकोटमा पिकनिक ‘स्पट’ निर्माण गरिएको छ । गल्कोट नगरपालिकाबाट बिनियोजित रु २ लाख बजेटबाट गल्कोट नगरपालिका ३ हटियाको पूर्णकोेटमा उक्त स्पट निर्माण गरिएको हो । उक्त स्थलसम्म पुग्नका लागी मोटरबाटो समेत निर्माण गरिएको छ ।
केहि दिन अघिमात्र गल्कोट नगरपालिका ३ को पहलमा सहश्राधारा झरनामा क्यानोनिङ खेलको सफल परीक्षण गरिएको थियो ।
हटिया बजारदेखि १ घण्टा ३० मिनेटको पैदल र ४५ मिनेट गाडीमा पुगिने उक्त ठाउमा पिकनिक स्थलका लागी २० देखि ३० जनासम्म अट्ने टहरा निर्माण गरिएको गल्कोट नगरपालिका ३ का वडाध्यक्ष वीरजङ भण्डारीले बताए । बुढापाकाका अनुसार उक्त ठाउमा पहिले जितारी बम मल्ल आएर बसेको भनाई छ । कोटमैदान देखि पैदल रुपमा १० मिनेट हिडेपछि उक्त स्थानमा पुगिने भएकाले आगामी चैते दशैँसम्म उक्त ठाउमा पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन शौचालय निर्माण, खानेपानी र बिजुलीको ब्यवस्थापन गरिने वडाध्यक्ष भण्डारीले बताए ।
पिकनिक स्पटभित्र एकैसाथ ६ समूहले मनोरञ्जन गर्न सक्ने वडा सदस्य झहर बहादुर खत्रीले जानकारी दिए । पिकनिक स्पट रहेको ठाउँबाट गल्कोट क्षेत्र सँगै धौलागीरी, माछापुच्छु्रे, अन्नपुर्ण लगायतका आधा दजर्न हिमश्रृंखलाहरु अवलोकन गर्न सकिने खत्रीको भनाई छ ।
यसैबिच पूर्णकोट प्याराग्लाईडिङ्को नयाँ गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न सकिने देखिएकाले आगामि चैते दशैको अवसरमा त्यस्को सम्भाब्यता अध्ययन गरिने वडाअध्यक्ष भण्डारीले बताए । यसलाई विकास गर्न गल्कोट नगरपालिका र सँगै सबै जनप्रतिनिधिहरुले चासो राख्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
यो पिकनिक स्थल मात्रै नभएर प्यारागलाईडिङको पाठशालाका लागि पनि सम्भावना रहेको छ अध्यक्ष भण्डारीले भने “यस क्षेत्रमा आउनेहरुका लागी सडक, खानेपानी, शौचालय र पर्यटकका लागि बास बस्ने व्यवस्थाका लागी पनि काम अगाडी बढाउने छौं ।” प्यारागलाईडिङ्को पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा चिनाउन आफु प्रतिबद्ध रहने भण्डारीले बताए ।
गल्कोट पर्यटकीय, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सौन्र्दयले भरिएको नगरपालिका हो । प्राकृतिक सम्पदा सगै यहाँका लोकसंस्कृति र पर्यटक लोभ्याउने भीरपाखा रहेको नगरपालिकालाई पछिल्लो समय प्यारासुटको लागि गन्तव्य स्थल बनाउन पहल गरिने स्थानिय हिरा भण्डारीले बताए ।
बिद्यादेवी भण्डारी दुई तिहाई बढी मतले दोश्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति निर्वाचित !